Nkọwapụta |lọ ọrụ | Xiamen Yasin Industry na Trade Co., Ltd.
Shell Akwukwo nri efu Capsule Shell
Tọrọ ntọala na 1986, Yasin Gelatin bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebugharị gelatin na ihe ndị na-eme ka gelatin (collagen, gelatin leaf and shell capsule shell) na China.
Yasin bụ mgbe a ghọtara dị ka a pụrụ ịdabere na soplaya n'ihi na ya elu àgwà. Teknụzụ bụ ọta anyị, na mma bụ ndụ anyị. Na mbido, anyị guzobere amụma nke "mma na - eme akara ọkachamara na akara gelatin" ma chọọ maka mmalite na iche iche dị elu. Site na mgbe ahụ anyị wuru ndị otu ọkachamara nwere nnukwu nka, na-ewebata teknụzụ dị elu na akụrụngwa sitere na mba ofesi, na -emepụta usoro mmepụta na usoro siri ike dịka ụkpụrụ mba si dị, wee guzobe usoro nlekota akpaka maka imepụta. Mgbe mgbanwe sayensị nke ngwaahịa dịgasị iche iche, a na-eme usoro mmepụta zuru oke iji kwado ogo ngwaahịa dị n'akụkụ niile.
Anyị nwere otu ndị nwere ahụmahụ na ndị a zụrụ azụ nke ọma, iwebata mba na teknụzụ na ngwa ọrụ, site na mmezi ngwaahịa usoro sayensị, yana teknụzụ mmepụta zuru oke yana ngwa ọrụ dị elu, ọrụ nhazi usoro iji hụ na ngwaahịa dị mma. n'ụzọ zuru ezu na-agbaso ụkpụrụ mba, ụkpụrụ ụlọ ọrụ, ụkpụrụ ụwa ma ọ bụ ụkpụrụ pụrụ iche ahaziri nke ndị ahịa chọrọ. Ducingmịpụta ngwaahịa ruru eru bụ uru ọka nke na-eduzi ụlọ ọrụ anyị, yana inye ọrụ dị mma na ọnụahịa asọmpi.
Tụkwasị na nke a, anyị na-anya isi maka ịkwado nguzosi ike n'ezi ihe kachasị elu, nke gụnyere ọrụ anyị na ndị ahịa anyị. Anyị n’ezie na-elekọta ndị ọrụ anyị n ’ọkwa niile nke mere na anyị lebara anya nke ọma ndị ọma ha gbasara ọrụ ha na gburugburu obibi ha yana ndụ oge ezumike ha ebe a.
Site na nka na uzu anyi na ndi oru ahia nke ndi mmadu, ndi ahia anyi na-ele anyi anya dika ndi ahia ha nwere ike ikwado. Anyị dị njikere ịrụ ọrụ ọnụ na ndị ahịa anyị niile n'ụlọ na mba ofesi iji mepụta ọdịnihu dị mma!